Ọrịa cancer na ime mmụọ: Ndị ọrịa okpukpe nwere ike ịnata ihe enyemaka ahụike ike - Ụwa 2022
Ọrịa cancer na ime mmụọ: Ndị ọrịa okpukpe nwere ike ịnata ihe enyemaka ahụike ike
Ndị ọrịa kansa na-arịa ọrịa na-egbu mgbu ga-eme mkpebi ndị na-agbawa obi mgbe ha nọ n'okpuru nrụgide mmetụta uche pụtara ìhè, na-abụkarị n'ime obere oge. Nhọrọ njedebe nke ndụ nke ndị ọrịa bụ ndị òtù okpukpe na-akwado dị iche na nke ndị ọrịa nwere àgwà okpukpe karịa?
Ee. Ma n'ụzọ ị nwere ike ị gaghị atụ anya.
Ndị ọrịa cancer bụ ndị kọwara onwe ha dị ka ndị obodo okpukpe ha na-akwado nke ọma anaghị ahọrọ nlekọta ụlọ ọgwụ karịa ndị nwere obere nkwado ime mmụọ, dị ka nchọpụta e mere n'oge na-adịbeghị anya. Ndị ọrịa nke obodo okpukperechi ha kwadoro na-enwekwa ike ịnweta enyemaka ahụike na-eme ihe ike, na-enwekwa ike ịnwụ na ngalaba nlekọta ahụike (ICU) ma e jiri ya tụnyere.
Ọdịiche a na-adịgide mgbe njikwa maka agbụrụ na atụmatụ nlekọta tupu oge eruo. Ọdịiche siri ike n'etiti ndị ọrịa sitere na agbụrụ / agbụrụ pere mpe na ojiji dị elu nke omume mmegide okpukpe. “Nnagide okpukperechi” na-ezo aka n'imeso nrụgide ọgụ site n'ekpere, nkwado ọgbakọ, nlekọta ndị ọzụzụ atụrụ, na okwukwe okpukperechi.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọbụlagodi n'etiti ndị na-anata nkwado ime mmụọ dị elu (pasent 43 nke ihe nlele ahụ), nlekọta ime mmụọ nke ndị otu ahụike na-enye na-ejikọta ya na ndụ ndị ọrịa ka mma, iji ụlọ ọgwụ na-eme ihe, na ntinye ahụike na-adịghị ike na njedebe. ndu (EoL).
Site na Septemba 2002 ruo Ọgọst 2008, ndị nchọpụta debanyere ndị ọrịa 343 nwere ọrịa kansa dị elu wee soro nke ọ bụla ruo ọnwụ. Ogologo oge ntinye aka bụ ụbọchị 116. Ajụjụ a tụlere ka ndị obodo okpukpe siri gboo mkpa ime mmụọ ndị ọrịa. Nhọrọ nlekọta ahụike EoL gụnyere: ụlọ ọgwụ, usoro EoL na-eme ihe ike (nlekọta na ngalaba nlekọta ahụike, ume ọhụrụ, ma ọ bụ ikuku ikuku), na ịnwụ na ngalaba nlekọta ahụike.
Ụkpụrụ nlekọta nlekọta obodo, gụnyere ndị nke National Consensus Project for Quality Palliative Care na Joint Commission, ejikọtawo ogologo oge nlekọta ime mmụọ - nlekọta nke na-aghọta okpukpere chi na/ma ọ bụ ọnọdụ ime mmụọ onye ọrịa na-aga maka mkpa ime mmụọ.
N'agbanyeghị ụkpụrụ nduzi ndị a, ndị otu ahụike na-enyekarị nlekọta ime mmụọ nye ndị ọrịa nwere ọrịa siri ike. Ndị nchọpụta kwenyere na nsonaazụ sitere na ihe mgbochi bara uru, dị ka akụrụngwa ezughị oke, kamakwa site na egwu nke ịkpasu ndị ọrịa iwe.
Otu ihe mere nkwado nke otu okpukpere chi nwere ike isi mee ka nlekọta na-akpa ike ka ukwuu bụ na ndị dị otú ahụ na-ekwusi ike ugboro ugboro na nnọgidesi ike n'oge nile, na olileanya dị n'ime nhụjuanya.
N'amaghị nke eziokwu biomedical, ndị ndụmọdụ okpukpe nwere ike ịnye ndị ọrịa ndụmọdụ nwere ezi ebumnuche nke nwere ike ịkwado ntinye aka na-abaghị uru na ahụike. Ma ụfọdụ Ndị Kraịst - ndị nwere ọtụtụ ihe atụ - na ndị na-eso ọtụtụ omenala okpukpe ndị ọzọ nwere ike ịsọpụrụ nkwenye na ọrụ ebube. Enwere ike ịhụ ọgwụ dịka ụzọ bụ isi nke Chineke na-etinye aka.
Nnyocha e mere na ekwentị nke mmadụ 1033 bi na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa chọpụtara na 80% kwadoro nkwenye na Chineke na-esi n'aka ndị dibịa gwọọ ọrịa. Ya mere, ndị okpukpere chi pụrụ ịtụ aro na ịghara ịhọpụta ọgwụ ike ike na-egbochi ụzọ bụ́ isi nke Chineke pụrụ isi na-agwọ ọrịa.
N'agbanyeghị nke ahụ, site n'ịkpọsa mkpebi EoL n'ụzọ na-agụnye ụkpụrụ ime mmụọ nke onye ọrịa, ndị otu ahụike nwere ike inyere onye ọrịa aka ịchọpụta na nkwenye na ọrụ ebube nwere ike ijidesi ya ike na ụlọ ọgwụ dịka ọ dị na ICU, ma ọ bụ na ịhọrọ ime. jichie usoro EoL ike ike adịghị agụnye iwepụ ihe n'aka "Chineke."